40 taona noho ny krizy politika : potika ny toekarena, marefo ny andrimpanjakana | NewsMada
40 taona noho ny krizy politika : potika ny toekarena, marefo ny andrimpanjakana
Tanjona nofaritana amin’ity taona ity ny hahitana fitombon’ny harinkarena 4,7 %. Nofaritana ho an’ny toekarena rahateo ny taona 2017, araka ireo laminasa ao anatin’ny PND. Politika voalohany hanatanterahana izany ny “Fitantanana, fanjakana manara-dalàna, fiarovana, fitsinjaram-pahefana, demokrasia, firaisankinam-pirenena”. Fanadihadiana.
Tao anatin’ny 40 taona i Madagasikara, nahitana krizy politika nifanesy hatrany tonga hatrany amin’ny fanonganam-panjakana. Tsy hita izay vokany hatramin’izao afa-tsy ny fihemoran’ny firenena indray. Notsiahivana nandritra ny fanokafana ny taon’ny toekarena 2017 ny faran’ny herinandro lasa teo fa mila fitoniana, filaminana, indrindra firaisan-kina ny fampandrosoana ny toekarena. Ny fiverimberenan’ny krizy politika, mamparefo ny andrimpanjakana samihafa, toy ny fitsarana ary mampahazo vahana ny kolikoly ka sarotra ny mamaly ny hetahetan’ny mponina.
Fanavaozana sy fanarenana
Tokony hifantoka amin’ny fanavaozana hatrany ny asan’ny fitondram-panjakana eo amin’ny fanarenana ny sampandraharaham-panjakana maro. Hita izany, ohatra, amin’ny tsy fahampian’ny fitaovam-piasana any amin’ny kaominina na any amin’ny faritra. Tsy misy tambiny any amin’ny olom-pirenena ny hetra aloany. Hatsaraina sy hamafisina ny fitantanana hisian’ny fampandrosoana isam-paritra amin’ny alalan’ny fitsinjaram-pahefana. Hajaina araka izany ny lalàna velona eto amin’ny firenena sy ny filaminam-bahoaka. Tompon’andraikitra amin’izany avokoa ny rehetra, araka izay tandrify azy.
Mila vaovao ny mpampiasa vola
Anatin’ny fanatanterahana ny PND ny fitiliana ireo olana rehetra. Miainga amin’ny zava-bita ny ahitana vokatra avy hatrany, afaka fotoana kely sy mety mbola maharitra. Ao ny tolo-kevitra izay tokony hampiharina avy hatrany, ao aoriana kely ary miandry fotoana elaela. Fantatra amin’izany tolo-kevitra naroso izany, ohatra, ny fandrindrana tsara ny politika napetraka sy ny tetikasa naroso ; fanohanana amin’ny tetibola, misy amin’izany tetibola izany azo omena avy hatrany, ao ny miandry kely sy miandry fotoana elaela. Tsara ho fantatr’izay mpampiasa vola rehetra, eto an-toerana sy avy any ivelany, ny vaovao rehetra misy amina toerana iray, indrindra ny any amin’ny faritra.
Violette Kakyomya : “Hiarahan’ny rehetra midinika ny fampandrosoana”
« Heveriko amin’ny maha mpandrindra ny asan’ny Firenena mikambana (NU) ahy eto Madagasikara fa fotoan-dehibe izao taona ho an’ny toekarena 2017 izao, hiarahan’ny rehetra midinika momba ny politikan’ny fampandrosoana. Hita tamin’ny fotoam-panombohana teto ny fandraisana anjaran’ny solontenan’ny sehatra tsy miankina, olom-boafidy, mpandraharaha samihafa, fitondram-panjakana. Tsy tokony hotapahina izany fa hifanakalozan-kevitra ny asa rehetra, indrindra ny any amin’ny faritra, izay be mponina indrindra.
Noho izany, tokony zahana akaiky ny zava-misy any amin’ny faritra, izay betsaka ny asa fampandrosoana miandry amina sehatra rehetra, toy ny lalana na fotodrafitrasa hafa. Hita aloha fa nisy fihatsarana ny toekarena ankapobeny nanomboka ny taona 2014, nefa mbola tsy ampy, koa ilaina ny fitohizan’ny fandaharanasa rehetra hampiakatra ny harinkarena », hoy ny mpandrindra ny asan’ny NU, Violette Kakyomya.
Rtoa Violette Kakyomya, nanomboka miasa eto Madagasikara ny volana marsa 2016. Izy no mpandrindra ny asan’ny NU eto an-toerana ataon’ireo sampana miankina aminy rehetra: Pnud, Unicef, Onudi, FAO, Pam … Andraikiny ny mandravona sy mandrindra ary manatsara ny asan’ireo sampana ireo, araka izay laharam-pahamehana hisian’ny fampandrosoana. Izy no masoivohon’ny Firenena mikambana eto Madagasikara, notendren’ny Sekretera jeneraly, António Guterres.
Olana any amin’ny tontolo ambanivohitra
Na ahoana na ahaona, miantoka ny fampandrosoana sy ady amin’ny fahantrana ny sehatry ny fambolena. Mitombo isa hatrany ny mponina, mitombo isa miaraka amin’izany koa ny tanora. Amin’ny ankapobeny, 71 % amin’ny fianakaviana miaina any amin’ny tontolo ambanivohitra. Betsaka ankehitriny ny mitsoa-ponenana avy any ambanivohitra miakatra an-tanàn-dehibe. Zara raha mamboly na tsy afa-mamokatra mihitsy izy ireo, noho ny sakana maro. Raha nohadiahadina ny olana mahazo azy ireo, nilaza fa :
– Noho ny toetr’andro (haintany , rivodoza , tondradrano…) : 48 %
– Tsy ampy fitaovana : 32 %
– Aretina : 31 %
– Tsy ampy tany volena : 29 %
– Vidim-bokatra : 24 %
– Tsy misy masomboly : 20 %
– Tsy misy zezika : 15 %
Eo indrindra koa ny tsy fahampian’ny fotodrafitrasa, ka saika ny 50 % amin’izy ireo sarotra mahita fitaterana ara-dalàna hany ka ny 39 % no mba mahita tsena. Famahana ireo olana ireo ny fampiharana ny politika momba ny fampandrosoana, araka novelabelarina nandritra ny fanokafana ny taona ho an’ny toekarena 2017.
Pnud –Instat 2016.